Nkwado megide nsogbu gọọmentị Jordie Zwarts na-atụ ụjọ na tọn, mana ọ nweghị ihe ọ bụla na-enweta: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 14 Ka 2020	• 5 Comments
isi iyi: youtube.nl
Nwere ike ịbanye na okirikiri ego dịka Robert Jensen kwalitere na ya nkwuputa ikpeazụ, mana gini na eme gi ego? A bịakwara bịakwute m maka nkwado sitere na Bond initiator Government Affairs, Jordy Zwarts (lee foto), mana site na ụdịrị usoro a megide 5G, o nwebeghi ihe ọ bụla. Ma o mere, bulie kwuru puku kwuru puku euro (ọtụtụ isi mmalite) na enwere ike ịtụ anya otu ihe ahụ n'ụlọ ikpe megide mgbochi mkpọchi na otu mita na ọkara site na steeti.
"Kedu ihe kpatara nke ahụ bụ vortex ego na ị na - ekwularị na ọ gaghị abụ Vrijland? Ugbu a sonyere ndị agha! Café Weltschmertz na-akwado ya, Jensen na-akwado ya!“N'ihi na ndị ikpe na ndị ọka iwu swearụrụ iyi ịkwado ocheeze ahụ (ụlọ eze), ha agaghịkwa emebi ihe ha byụrụ iyi site n'iyi.
"Ee, mana usoro coronavirus bụ ihe iwu na-akwadoghị! Ha nwere ike nweta ihe!"Naanị ihe Jordy Zwarts ga-enweta bụ na akaụntụ akụ ya gbagotere na Robert Jensen ("jensbaba33”) Uru dị na ya site na ịkwalite ya. Ka ọ dị ugbu a, ị na-eche na ị naghị eme ihe ọ bụla.
N’ezie ị nwere ike ịmara n’ezie na onwe gị, mana m dọrọ gị aka na ntị. Echere m na anyị kwesịrị ịmeta na ihe na-eme.
Site na Robert Jensen na Jordy Zwarts (Federal Government Affairs) ị na-aga n'ihu itinye ebumnuche ndị ọzọ. Debere € 29 ma nwee olile anya na onye ọka iwu ga-etinye akwụkwọ ikpe, nke agaghị enwe ike ma ọ bụ enweghị mmeri. Really chọrọ n’ezie ịbụ onye nzuzu ma kwere na onye ọka ikpe ga-ekpe steeti ikpe? N'ezie ọ bụghị. Ha niile alleụrụ iyi nye okpueze.
Anyị enweghị oge ịla n'iyi. Ọ bụ nkeji iri na abụọ tupu 1. Gọọmentị nke oge a egosila na ọ nwere ike ịgbanye ndị obodo niile mgbaghasị n'ime izu ole na ole. Enwere ike iwere ihe mbụ ga-ewere dị ka ihe na-agaghị ekwe omume na nke a na-agaghị achọpụta. Akụ na ụba na ụzọ niile ebikọtara ọnụ abụrụla nke a gbanwere agbanwe. Nke ahụ pụtara na mgbanwe ngwa ngwa bụ ihe kwere omume. Ya mere mgbanwe nwere ike ibia ngwa ngwa.
Ọ gaghị na-atụ anya mgbanwe ahụ site na gọọmentị ma ọ bụ na-atụ anya ngbanwe ahụ site na ntinye aka megide Ihe Ọchịchị. Anyị ga-eme ya onwe anyị! Anyị ekwesịghị ịgbanwe iwe anyị ka anyị chere maka njikọ, anyị kwesịrị ịgbanwe iwe anyị ka ọ bụrụ ike na arụmọrụ doro anya. Nrụ ọrụ onwe gị, mee ya n'onwe gị. gụọ gaa n'ihu ebe a ...
Robert Jensen (jensen.nl) na 'kwụsị mkpọchi', nke, dị ka Martin Vrijland si kwuo, bụ ụgbụ nchekwa.
Tags: Tie ike, ndị ọka iwu, ọkàiwu, otu na ọkara, nkekọ, kọfị, de, agba, iwu, Jensen, jensen.nl, jordy, mkpọchi, mita, ihe ndi ochichi, proces, Government, Kwụsị, megide, Weltschmertz, mmiri, ojii
Maka ndị na - agụ akwụkwọ ọhụrụ: Freemason na - eme ka ị mara mgbe niile na ha so na klọb ahụ. Nọmba 33 bụ ọnụ ọgụgụ Masonic dị mkpa.
Jensen kwuru kwuru na-erute nkeji iri atọ na atọ na Jensen kpọrọ onwe ya Jensbaba33.
Nweta foto a? Mmegide a na-achịkwa.
Baba bụ nnukwu mba Africa siri ike site n’otu mba dị n'akụkụ Ọwara Guinea. Otu onye ahia ohu gba ya ego wee re ya n'ụwa ọhụrụ. Ruo ogologo oge o mere ka ndụ ohu na ihe ọkụkụ ndị America, ruo mgbe onye mgbapụta ahụ Redbeard napụtara ya. Kemgbe ahụ, ọ bụrụla onye na-ekwenye ekwenye nke onye isi ụgbọ mmiri na-atụ ụjọ, tinyere Tripod na nwa nwoke Erik nkuchi Erik. Nwanne ya nwanyị bụ Aïcha bụ ohu na Algiers, bụ onye e gburu mgbe ọ nyeere Erik agbapụ n'obodo ahụ.
Ọ buru nnukwu ibu, sie ezigbo ike ma na-egwu mmiri dị ka dolphin. O nweghi ike ikwuputa “r” nke a aputaghi na ya amaghi ihe, nihi na obu otutu echiche ya na ikike nghota di uku. Ọ bụ ya mere Roodbaard na Erik na-ahapụ nzukọ nke mbibi ala gaa Baba.
Rose dere, sị:
Ee, otutu b (l) ab (l) onye…
Ihe kpatara Jensen na - elekwasị anya ugbu a (ma eleghị anya ọzọ echi) na ntinye aka megide ihe gọọmentị bụ n'ihi na ị nweghị ike isonye na nnwere onwe obodo. Must ga-anọ n'ime ụgbụ nchekwa a na-achịkwa na, karịa, emela igwu mmiri ma bido onwe gị.
Oge ime nke ahụ: https://www.fvvd.nl/
26 May 2020 na 09: 49
" Should ga-anara ma ọ bụ jụ mgbochi Covid-19 ma ọ bụrụ na ọ bụ iwu? Ihe a ga-eme?
Dọọ ọchịchị onye kwuo uche ya ụzọ mkpirisi site na mkpọchi na iweghachite akụ na ụba »
Nleta ha: 2.485.215
SalmonInClick op Corona Nsogbu Covid-19 bụ ihe echetara afọ 2003 MS Blaster virus nke ana - akpọ Bill Gates